Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 17, 2020 00: 15 No Comments
Haweenka qaarkood way yaabaan ama sheegtaan: "Haddii xaasas badan ayaa ka ruqsad yar, miyaysan la mid noqon doonin polyandry? ". Haddii ninku dhowr xaas yeelan karo, haweeneydu ma yeelato waa iniyadu malaha dhowr nin oo bilaa tab ah ?? Taasi miyaanay cadaalad ahayn sidoo kale ??
Si kastaba ha noqotee, gobollada qaarkood ama waddamada adduunka, polyandry maahan, xaaraan, waa dhaqan guud. Nepal, Paraguay, Nigeria ayaa ka mid ah Irigwe, oo ka mid ah Maasai-ka Kenya iyo Tansaaniya, DRC (Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo) qabiilada qaar sida Bashilele gudaha Kasai, waqooyiga Hindiya ee gobolka Jaunsar-Bawar, at Mosuo iyo Tibetanka Shiinaha jooga, dadka Tupi dhexdooda iyo Bororos Koonfurta Ameerika (…). Si aad u magacawdo laakiin dhowr, polyandry ayaa lagu dhaqmaa halkaas.
Intii lagu guda jiray dood ku saabsan guurka xaasaska badan, faragelinta, murqaha aad u weyn, ee Sara Muuqaal yimid waqtiga saxda ah, taas oo ahayd mid u roon in polyandry. Soo hel faallooyinka cakiran ee midka u qalma cinwaanka afhayeenka arrimaha haweenka. Nafta xasaasiga ah inay ka fogaato!
Sara Muuqaal : “Waxaan taageersanahay (Polyandry), taas oo ah wax fiican. Inaga, haweenka waxay leeyihiin sidoo kale suurtagalnimada in la yeesho 6 ama in ka badan oo rag ah bilaa tabco. Sababta ?? Waa hagaag, innagoo haysanna 6 nin oo na siiya hawlo iyo lacag. Haweenku waa sarraynta adduunka, ragga ayaa innaga hooseeya. Marka anigu waxaan ka soo horjeedaa guurka badan ee ragga, ninku wuxuu yeelan karaa hal naag oo keliya wax kalena ma jiraan, haddii uusan taas aqbalinna wuu keligiis dhintaa.
Raga waa qiyaanooleyaal iyo beenaalayaal, waxay u adeegsadaan diintooda marmarsiinyo inay ku yeeshaan 4 ama 5 dameer oo ay ku aflagaadeeyaan guriga, laakiin runtii ma jecla 5-taan haween waayo jacaylku waa arrin kaliya 2 qof , ma jeclaan kartid in kabadan hal dumar hal waqti isku mid ah, taasi ma jirto. Kaliya waxay rabaan inay yeeshaan haween badan galmada darteed, taasi waa sababta kaliya ee ay u leeyihiin. Shakhsiyanna, waxaan qabaa inay tahay wax laga yaqyaqsoodo.
Haweeneydu waa u qalantaa 100 nin, sababtaas darteed kaligaa waa inaadan xitaa ka fikirin guurka badan. Raggu waxay nagu leeyihiin xushmad iyo isu dhiibid, haweenku way ka sarreeyaan ". Dhammaadka oraahda. Maxay kula tahay ??
Oct25 03: 38